Ohatrinona ny vidin'ny orinasanao? | Martech Zone
Ohatrinona ny vidin'ny orinasanao?
Alatsinainy, Septambra 22, 2008 Alatsinainy, Septambra 22, 2008 Douglas Karr
Wal-mart iray ihany. Wal-mart dia orinasa iray ihany no manana tolo-kevitra sarobidy: ny vidiny mora. Izy io dia miasa miaraka amin'i Wal-mart satria afaka mivarotra ilay vokatra mitovy mora kokoa izy ireo noho ny fivarotana antsinjarany manaraka.
Tsy Wal-mart ianao. Tsy afaka mandeha miasa ianao hamantatra ny fomba hampihenana ny vidiny isan'andro. Ary ianao koa tsy tokony. Tsy manam-paharoa ny orinasanao ary tsy misy atolotry ny orinasa hafa.
Ny tanjon'ny varotrao dia tokony manavaka ny tenanao eo amin'ny fifaninanana. Aza mifaninana! Jereo hoe inona no mahasamihafa anao sy ny fomba mifanaraka amin'ny filàn'ny fanantenanao. Omeo referansy sy kaonty olona voalohany momba ny fomba nanoloranao ho an'ny mpanjifanao ny prospekanao.
Misy karazana orinasa telo:
Orinasa mandefa vola = mavesatra loatra
Orinasa manatitra = sarany ambany
RNH, ireo no ihany karazana orinasa. Orinasa manatitra tsy afaka mihoa-pefy, ny vidiny aloanao dia ampahan'ny fandefasana. Ireo teny roa ireo dia mitovy hevitra amin'ny iray hafa.
Ireo orinasa manatitra dia mitaky ny habetsany sahaza na ambanin'ny sandan'ny zavatra omeny. Ny ankamaroan'izy ireo dia mihena ny sarany. Anisan'ireny angamba ianao.
Nahita mpivarotra mitentina aman'arivony dolara aho, saingy ny ampaham-bidy kely fotsiny no natolotra. Manana namako izay nandefa am-pahibemaso Bebe kokoa manome lanja azy ireo saingy miady mafy izy ireo hijanona ho ambony rano.
Tsy Wal-mart ianao, atsaharo ny fandefasana vidiny ny tenanao tahaka izany. Mendrika bebe kokoa ianao.
Tags: adeolonohfanaovan-gazetyChandlermpitatitra entananatrehin'ireomobbasemozika findayfampiharana finday mozikamyasinneilbermanspotifyfitantarana
Sep 26, 2008 ao amin'ny 4: PM PM
Amen Doug! Tena tsy afaka nanaiky bebe kokoa aho. Heveriko fa mampalahelo fa amin'ny fiarahamonina dia lasa variana loatra amin'ny PRICE isika. Manasarotra ny fampisehoana ny tena VALUE! Ny hany volafotsy dia raha manome ho an'ny mpanjifanao ianao (satria orinasa maro no tsy) hanome lanja ny serivisinao izy ireo ary (manantena) hanome izany amin'ny hafa. Ny mampiavaka ny vidiny sy ny sandany dia ny marketing.
Sep 27, 2008 ao amin'ny 12: PM PM
Ny mahatsikaiky dia ny fiheveran'ny olona ny vidiny matetika dia mitarika azy ireo handany vola be - indrindra rehefa tsy nahomby ny paikady naloany ary mila mandany bebe kokoa izy ireo handresena ny tsy fahombiazana.
Sep 27, 2008 amin'ny 10: 59 AM
Alefaso tsara Doug ary hitanao. Izaho dia mitady ny hanavaka hatrany amin'ireo mpifaninana amiko ary manandrana manao izany amin'ny fomba mahafinaritra vitsivitsy, ary koa amin'ireo matotra. Toa mandeha io.
Niasa tamina tetikasa iray aho tato ho ato, ary matoky 100% aho fa hanao asa tsara kokoa sy mahomby kokoa noho ny olona hafa ao anaty rafitra. Midina any amin'ny £ $$$ izany ary koa raha mila “consultant” na masoivoho lehibe ry zareo.